बच्चा न‘हुने महिलालाई बच्चा हुने, ब”नाइदिने भन्दै पंडित आफैं जुटेपछि / भिडियो भयो भाईरल | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य बच्चा न‘हुने महिलालाई बच्चा हुने, ब”नाइदिने भन्दै पंडित आफैं जुटेपछि / भिडियो...
त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस थिए ।जो यस मामिलामा त्यहाँ चर्चा पाएका थिए । आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार स्थानीय व्यक्तिले सूचना पाएपछि घटना स्थलमा पुगे ।संसारमा कहिले काँही निकै अचम्म लाग्दा खबर आउने गर्छन ।
हालै स्पेनवाट यस्तै अनौठो समाचार आएको छ । स्पेनमा एक गोरी महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि आफ्ना श्रीमान लाई अनौठो आ’रोप लगाइन् ।पति पत्नीमा निकै हार्दिकता थियो ।तर जव महिला सुत्केरी भइन् सबै माहौल एकाएक परिवर्तन भयो ।
उनले बच्चा देखेपछि कसैले नसोचेको आरोप पतिलाई लगाइन् ।आफुले कालो वर्णको बच्चा जन्माएपछि ति महिलाले श्रीमान लाई अरु कुनै कालो वर्णको महिलासंग सम्पर्क राखेको आरोप लगाएकी छन् । यो घटना जामोरा (सपेन) को अस्पतालमा केही समय अघि सम्म सबै ठिक थियो ।
एकै छिनमा अस्पतालमा हल-चल भयो । महिलाले जन्म दिएको बच्चा गोरो थिएन ।त्यो कालो रङ्गको थियो । यस्तो थाहा पाएपछि महिला आफ्ना पतिसङ्ग रिसा’इन । लेवर रूममा बच्चा को जब सम्पूर्ण सानो शरीर बाहिर आयो,डाक्टरले चाँडै पत्ता लगाए कि बच्चा एकदम सही छ,।
एक कालो केटा । उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । तर जब चिकित्सकले उनलाई बच्चा हातमा दिए उनी बच्चा देखेर अचम्म परिन् । उनले अचम्मको ब्यवहार पनि देखाइन् ।उनले तुरुन्तै आफ्नो श्रीमानको हात तान्दै भनिन, की कुकुर ! यो कस्को छोरो हो, मलाई थाहा थियो कि तिमीले मलाई धोका दिइरहेका छौ । हेर त यो तिमीले यो के गरेका छौ ।
श्रीमतीले यसो भन्दा उनका श्रीमान छक्क परेर उनको अनुहारमा हेरीरहेका थिए ।अवस्था यस्तो आयो की त्यहाँ वि’वाद समेत बढ्यो । बि’वाद बढेपछी उनलाई मेडिकल टोलीले कोठा छोड्न भन्यो ।पक्कै पनि, उनीहरूलाई त्यहाँ के हुँदैछ भनेर बुझ्नको लागि सजिलो थिएन।
एक चिकित्सकले भने,’पतिले काली केटिसङ्ग सम्पर्क गर्दा श्रीमती ले कालो बच्चा जन्मा’उदिनन त्यसैले महिलाले भनेका कुराहरुको कुनै मतलब भएन । हामीले हाँस्नु पनि सकेनौ तर उनको कुरो हासो लाग्दो नै थियो ।
Previous articleआज हेर्नुहोस कस्तो छ तपाईंको भाग्य र पाथिभरा माताको दर्शन गरौ, आज २७ भाद्र २०७८ आइतवार को राशिफल हेर्नुहोस
Next articleसरकारले दशैंमा प्रति घर परिवारलाई १० हजार राहत दिने, कसरी लिने त?
विश्वको सबैभन्दा ठूलो र महङ्गो ३ वोटा घर कुन कुन हो के तपाईंलाई ...
३.बिल्टमोर एस्टेट - एशभिले, उत्तर क्यारोलिना - १७८,९२६ वर्ग फुट संसारका प्रायः अन्य निजी म्यानहरू भन्दा फरक, बिल्टमोर एस्टेट एक मोडमा आउँछ। १९३० मा,...
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अब सरकारी कम्पनीबाट खाद्यान्नमा छुट नपाइने भएको छ। सरकारले उपत्यकामा मंगलबारबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट...